Kufamba kwemavhiri maviri kwakakurumbira pasirese
Sekureva kweChina Tsika yekuongorora data, huwandu hweChina hwekutengesa kunze kwemaviri emavhiri emagetsi emabhasikoro apfuura mamirioni gumi kwemakore matatu akateedzana, uye achiri kukura gore rega rega. Kunyanya mune dzimwe nyika dzeEuropean neAmerica uye Southeast Asia nyika, iyo yemagetsi bhasikoro musika iri mune yega ...
Iine kukurumidza kukura kweAI, Yayo tekinoroji kunyorera mhedzisiro yakaitwa mune akawanda maindasitiri mune yenyika hupfumi. Zvakadai seAI + kumba, AI + Security, AI + Medical, AI + dzidzo zvichingodaro. TBIT ine mhinduro nezve kudzora kupaka neAI IOT, vhura mashandisiro eAI mumunda o ...
TBIT inobatsira TMALL e-bhasikoro kuti riite zvirinani mubhizimusi rekufambisa bhizinesi
2020, igore rakagwinya kune ese maviri-mavhiri e-bhasikoro indasitiri. Kubuda kwe COVID-19 kwakonzera kuwedzera mukutengesa kwema-e-bhasikoro maviri-mavhiri mupasi rose.Pane mazana emamiriyoni mazana matatu e-mabhasikoro muChina, uye avhareji yekukwira nguva yemunhu mumwe nemumwe ingangoita awa rimwe pazuva. Haisi chete ...
Ipuratifomu yeTBITB NB-IOT yeaseti yekumisikidza terminal & clo
NB-IOT, iyo tekinoroji huru ye5G IOT mune ramangwana Chikunguru 17, 2019, mumusangano ITU-R WP5D # 32, China yakapedzisa kuendesa kwakazara kweiyo IMT-2020 (5G) mukwikwidzi tekinoroji mhinduro uye yakawana kugamuchirwa zviri pamutemo tsamba yekusimbisa kubva kuITU ine chekuita nemumiriri we5G techno ...
TBIT's akangwara nyowani mutyairi webhasiketi yemagetsi yasimudzira
Iyo nyowani akangwara mutungamiriri ane bhuruu zino-inductive yemagetsi bhasikoro inogadzirwa neTBIT (inozotumidzwa semutongi wee-bhasikoro nenhare mbozha) inogona kupa vashandisi zviitwa zvakasiyana siyana, senge isina kiyi kutanga, induction pamwe nekuvhura, bhatani-rimwe bhatani , Simba rakabudiswa, imwe-cl ...
IOT inogona kugadzirisa dambudziko rezvinhu zvarasika / zvakabiwa
Mutengo wekutevera nekutarisa zvinhu wakakwira, asi mutengo wekutora tekinoroji nyowani wakachipa kwazvo kupfuura kurasikirwa kwegore rose kwe $ 15-30 bhiriyoni nekuda kwezvinhu zvakarasika kana zvakabiwa. Ikozvino, iyo Internet yezvinhu iri kukurudzira makambani einishuwarenzi kuti awedzere kupa kwavo kweinishuwarenzi pamhepo masevhisi, uye ...
TBIT inounza mikana yakawanda kushambadzira mumaguta epasi-tier
Iyo e-bhasikoro yekugovana Management Platform yeTBIT ndeyekupedzisira-kumagumo kugovana system inoenderana neOMIP. Iyo Platform inopa yakanyanya nyore uye yakangwara kutasva uye manejimendi ruzivo rwevashandisi vemabhasikoro uye kugovana vatyairi vemidhudhudhu. Ipuratifomu inogona kuiswa kune akasiyana mafambiro mafambiro paruzhinji ...
Rakareruka uye rakasimba simba: kugadzira mota yemagetsi kuve nehungwaru
Mota yemagetsi ine rakakura boka revashandisi pasi. Nekuvandudzwa kwetekinoroji yeInternet, vanhu vari kutanga kupa zvakanyanya kutarisisa kumunhu, kurerutsa, fashoni, nyore, mota yemagetsi inogona otomatiki kufamba senge mota. Iko hakuna kudiwa kwekutarisa kwakatenderedza mota, yakanyanya c c ...